ဒေသိယဘာသာစကား နှင့် ဆက်စပ်ဘာသာစကားများ
ထိုင်းဘာသာစကားသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ တရားဝင် ရုံးသုံးဘာသာစကား ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ သန်း(၂၀)ကျော် (၂၀၀၀ ခုနှစ်) သုံးစွဲလျက်ရှိသည်။ စံပြထိုင်းဘာသာစကားသည် ဘန်ကောက် ပညာတတ်အသိုက်အဝန်း၏ စကားပြောဆိုမူပေါ်တွင် အခြေခံသည်။ ထိုင်းအလယ်ပိုင်းစကား အပြင်၊ ထိုင်းနိုင်ငံသည် အခြားဆက်စပ်သော တိုင်ဘာသာစကားတို့၏ မူရင်းဒေသလည်း ဖြစ်သည်။ ဘာသာဗေဒ ပညာရှင်များက ဤ ပေါရာဏ/ကွဲပြားမှုအသုံးတွေကို ဆက်စပ်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း မတူကွဲပြား ထူးခြားနေသော ဤဘာသာစကားများ၏ မူလပြောဆိုသူများက ဤသည်မှာ ဘာသာစကား၏ ကြွယ်ဝမှု (သို့မဟုတ်) တူညီသော ထိုင်းဘာသာစကား၏ဒေသိယအသုံး/ ထိုင်းဘာသာစကား၏ ကွဲလွဲမှုသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ထိုင်း at Ethnologue (18th ed., 2015)
Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Thai"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
Ausbau and Abstand languages
Andrew Simpson (2007)။ Language and national identity in Asia။ Oxford University Press။ Standard Thai isaform of Central Thai based on the variety of Thai spoken earlier by the elite of the court, and now by the educated middle and upper classes of Bangkok. It ... was standardized in grammar books in the nineteenth century, and spread dramatically from the 1930s onwards, when public education became much more widespread
Peansiri Vongvipanond (Summer 1994)။ Linguistic Perspectives of Thai Culture။ paper presented toaworkshop of teachers of social science။ University of New Orleans။ 26 April 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “The dialect one hears on radio and television is the Bangkok dialect, considered the standard dialect.”
Antonio L. Rappa; Lionel Wee (2006)၊ Language Policy and Modernity in Southeast Asia: Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand၊ Springer၊ pp. 114–115